Saudia Airlines Kuronga Itsva yeCaribbean Kuwedzera neZhizha 2022
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Saudia Airlines Kuronga Itsva yeCaribbean Kuwedzera neZhizha 2022
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika muJamaica, Hon. Edmund Bartlett, (kurudyi) naKapteni Ibrahim Koshy, CEO weSaudia Airlines, vanokwazisana maoko kuti vasimbise chibvumirano ichi. Vakatarisa ndiSeneta Hon. Aubyn Hill, Gurukota Asina Portfolio muBazi reKukura Kwehupfumi uye Kugadzira Mabasa. Chiitiko ichi chaive musangano wekukurukura zvirongwa zveSaudia Airlines kuti iwedzere ndege kuenda kuJamaica nezhizha 2022. Vashumiri Bartlett uye Hill vaive muRiyadh, Saudi Arabia, kutsvaga mikana yekutsvaga mari uye kuwedzera rwendo rwekushanya kuJamaica.
Sezvo Jamaica ichitsvaga kukurumidza kudzoreredza kushanya ichitarisa pamisika isiri yechinyakare, Gurukota rezvekushanya, Hon. Edmund Bartlett akazivisa kuti hurongwa huri muchitima kusimudzira kubatana kwemhepo pakati peMiddle East neCaribbean, neSaudia Airlines yakagadzirirwa kuwedzera ndege kuenda kuJamaica nezhizha 2022.
Jamaica Tourism iri kuveza misika mitsva kuMiddle East iyo inopa kubatana kuAfrica, Asia neAsia Minor.
Muhurukuro neSaudia Airlines pane kunzwisisa kuti chishuvo ndechekuita zhizha ra2022.
Iyo yakafara zano nderekuti Jamaica ive hubhu yekubatanidza kubva kuMiddle East kuenda kuCaribbean, Central America, South America, uye nzvimbo dzeNorth America.
Ichi chiziviso chinotevera nzendo dzeGurukota Bartlett nguva pfupi yadarika kuDubai kuUnited Arab Emirates (UAE) neRiyadh, Saudi Arabia, kutsvaga mikana yekudyara nekusimudzira. kushanya kuenda kuJamaica.
“Masvondo maviri apfuura anga aine zviitiko zvikuru kwatiri mukuyedza kuveza misika mitsva kuMiddle East iyo inotipa hukama neAfrica, Asia neAsia Minor. Takaita hurukuro muDubai uye muRiyadh. Hurukuro neSaudia Airlines dzakafambiswa mberi uye takanzwisisa kuti pane chishuvo chekubatana nezhizha ra2022, "akadaro Minister of Tourism.
"Ruzivo rwehurongwa uhu huri kugadziriswa neSaudia nemumwe mutakuri achaita kuti mukana wekubatanidza uve nyore uye usina musono munguva pfupi. Saka tiri kufara zvikuru nekuona Middle East gedhi richivhurwa kuJamaica,” akawedzera.
Minister Bartlett akacherekedza kuti zano rakakura kuve Jamaica ichava hub yekubatanidza kubva kuMiddle East kusvika kuCaribbean, Central America, South America nenzvimbo dzeNorth America. Izvi zvichaisa Jamaica sepakati pekubatana kwemhepo pakati peEast neWest. "Tine chivimbo chekuti tichaona mhedzisiro kubva pane izvi munguva pfupi sezvo ndege dzese dzatakataura kuti dzakaratidza chido chakasimba cheCaribbean uye, kunyanya, Latin America," akadaro.
Saudia, yaimbozivikanwa seSaudi Arabian Airlines, ndiyo inotakura mureza weSaudi Arabia. Ndiyo yechitatu pakukura muMiddle East maererano nemari, kuseri kweEmirates neQatar Airways. Inoshanda nendege dzemumba uye dzepasirese kuenda kunzvimbo dzinopfuura makumi masere neshanu kuMiddle East, Africa, Asia, Europe neNorth America.